I-Nfl | June 2022
Abaphumeleleyo kunye neLost yeNFL yeArhente yasimahla
Ngelixa amaqela aphikisayo afana ne-Buccaneers egxile ekugcineni ii-cores zabo kwi-arhente yasimahla, ezinye iifranchise (ezinje nge-Patriots!) Ikhuphe imali encinci kule veki iphelileyo. Zeziphi ii-GMs eziza kuphuma kwezi zibukeka zilumkile- kwaye ngubani oza kuzisola ngezigqibo zabo kwangoko?
Ingcali yeCryotherapy ichaza iinyawo ezibandayo zika-Antonio Brown
I-raider 'superstar wide receiver ibikwa ukuba yafumana' iqabaka egqithisileyo 'kwiseshoni ye-cryotherapy ayilunganga. Ingenzeka njani le nto? Kwaye ungakuphepha njani ukwenzakala ngelixa usiya kumagumbi onyango angama-130-degree?
I-Hit enkulu kwi-Cam Newton Beka iProtocol ye-NFL yeNgqungquthela yokuHlola kwakhona
I-Panther ilahlekelwe ngabangcwele ngeempelaveki zamakhadi asendle, kodwa impilo kaNewton kunye nokukwazi kweligi ukuyivavanya kulawula iingxoxo emva komdlalo
Yiyiphi i-Skip Bayless ebhaliweyo ngokwenene malunga noTroy Aikman
Ukulandelela umthombo wobutshaba phakathi kwenkwenkwezi yekota kunye nomlobi wezemidlalo
Baye njani ooBrown 0-16
UCleveland unokukwenza ukuba kubonakale kulula, kodwa kunzima ukungaphumeleli kwi-NFL. Nantsi indlela yeligi yeligi ebaluleke kakhulu ekuqhubeni impumelelo kwi-feat nje kunyaka emva kokuya kwi-1-15.
Iveki ye-14 Ukukhethwa kweNFL: Amakhwenkwe abuyile
Kwaye ke yeyona TV ibalaseleyo yexesha eliphambili
Ngaba nyani uAaron Rodgers ngukumkani obuyayo?
Ukuphumelela okumangalisayo kweGreen Bay ngaphezulu kweChicago waziva kungenakuphepheka xa ikota yayo ibuyela kumdlalo ukwenzakala, kodwa imbali kaRodgers ibonisa ukuba ungaphantsi kokungoyisi kwimeko zomdlalo wokugqibela.
Isalathiso sokungathembeki: Ukusekwa kweMeko yeeTimu zeNFL ezintandathu ezingaphumeleli
Kweminye, kulapho kanye bafuna ukuba khona. Kwabanye, liphupha elibi.
Abaphumeleleyo kunye nabaphulukene neVeki ye-NFL ye4
URussell Wilson akapheki nje, wenza iiresiphi. Ngapha koko, ii-Eagles ngookumkani benkunkuma, uJoe Burrow noJustin Herbert bajongeka njengabapapashiweyo, kwaye umntu kufuneka asuse eminye (okanye yonke) yemisebenzi ka-Bill O'Brien.
Uyilo lokuqala lwe-NFL yo-2017 yeNqanaba lokuQala
AbakwaBrown baqhubeka nokuqokelela iimbaleki, iiTeans zihlawulela enye ikota, kwaye iiBhele… zenze ntoni?
Umdlalo wokuGqibela wabaRaiders e-Oakland ugutyungelwe kwiHole emnyama yeBoos
Iqela lidlale umdlalo wokugqibela e-Oakland ngeCawa ngaphambi kokuya eLas Vegas. Abalandeli babelusizi kwaye benomsindo, kwaye bazazisa iimvakalelo zabo. Uninzi luza kuyingcambu yeqela kwikhaya lalo elitsha, kodwa luphawula ukuphela kwexesha lesiseko sabalandeli.
Ujika i-DeAndre Hopkins yoRhwebo yayide yaNgaphezulu kuneLopsided kunokuba sasicinga
Xa iHouston yathengisa ngeenkwenkwezi zayo ukuya eArizona ngoMatshi, uninzi kwihlabathi lebhola ekhatywayo lothuka. Okwangoku iinyanga ezisibhozo, isichotho uMariya, kunye nomnye omkhulu wokudubula kamva, isivumelwano sijongeka simangalisa ngakumbi.
Ukuza ngokwemigaqo kunye neebhere zikaJay Cutler Urhwebo, kwiminyaka eli-10 kamva
Kule veki ngo-2009, iChicago yathumela ii-picks ezimbini zokuqala, ukhetho lwesithathu, kunye noKyle Orton kwiBroncos nge-franchise yayo entsha ye-QB. Ishumi leminyaka kamva, lixesha lokwenza ingqiqo yelifa-kunye nengqiqo-yesivumelwano esichaze ixesha leeBhere fandom.
USaquon Barkley, uNick Chubb, kunye nokuPhumla kweNFL's Rookie Running Backs, eziBekiweyo
Ngeeveki ezili-10 ezincwadini, ulawulo oluphezulu lwama-freshman rusher aluhambelani nomyalelo wabo wokuyila
Bamba phezulu, linda umzuzu: amaphupha alulamileyo eepilisi kunye namaphupha amabi ngumculo ongaphantsi owachaza i-Super Bowl Win ye-Eagles
Yima phezulu, linda umzuzu… iiKhozi zange zigqitywe emva kokuba zamkele umhobe kawonke-wonke womculo we-rap
Iipatriots ezilahlekileyo ekhaya ukuya kwiiDolphins, kwaye zalahlekelwa yi-First Round Round Bye
Ukuphulukana kokuqala kwe-England ukuya eMiami eFoxborough ukusukela ngo-2008 kubonisiwe ilungelo lokuloba ngenye imeko eneminyaka elishumi: ukudlala kumjikelo wekhadi lasendle
Isikhokelo se-Idiot kwisikhalazo se-Helmet ka-Antonio Brown
Isiphelo sisezandleni zeengxoxo zeentloko eziphezulu kwimbali yeNFL. Kodwa mhlawumbi usazibuza ukuba size njani apha.
Iveki yesi-2 Ukulimala okusongelwa ekumiseleni kwakhona ixesha leNFL
Isilayiti sokuqala sabona inani lamagama emarike esihla, kubandakanya uSaquon Barkley kunye noNick Bosa, ekuthiwa wabethwa kukulimala kwe-ACL
IiRams ziyeke iWade Phillips, iSage ekhuselayo emva kweProdigy ekhubekisayo
UPhillips, obesebenzisa ukhuselo lweNFL ukusukela ngaphambi kokuba kuzalwe umqeqeshi oyintloko, yayisisizathu esiphambili sokuba i-LA ikhoyo namhlanje
Abaphumeleleyo kunye nabaphulukene neVeki ye-NFL ye3
Manene namanenekazi, sinotayi-kwaye sibugwala kuloo nto. Kwaye: ukufunda ukuhlonipha uJosh Allen, ukuhlawulelwa kwe-DK Metcalf, kunye namaqela abolileyo abuyisa i-Apple ebolileyo.
ezona zicwangciso zibalaseleyo zebhola ekhatywayo
patrick swayze ngomgqibelo ebusuku phila
onke amerika asekwe kwi
ulwandle vs texans 2017
ixesha elininzi nge1975
Ukuphela kokuphela kokuzikhusela kuhamba ngokukhawuleza
UJim carrey njengo joe biden